Fampiasàna ireo Fitaovan’ny Mediam-Bahoaka Mba Hanandràtana Ireo Teny Zara Raha Misy Mpiteny · Global Voices teny Malagasy
Fampiasàna ireo Fitaovan'ny Mediam-Bahoaka Mba Hanandràtana Ireo Teny Zara Raha Misy Mpiteny
Voadika ny 08 Novambra 2011 2:43 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Aymara, Français, Italiano, Português, عربي, English
Miaràha amin'ny Tetipanorona vaovao, Rising Voices, Indigenous Tweets, ary ireo mpikaroka hafa amina resadresaka ao amin'ny aterineto momba ny Fampiasana Ireo Fitaovan'ny Media Sosialy mba Hanandràtana Ireo Teny Zara Raha Misy Mpiteny ny 16-22 Novambra 2011.
Ny Sampan-draharahan'ny Firenena Mikambana misahana ny Fampianarana, Siansa, ary Kolontsaina (UNESCO) dia mamoaka tsy tapaka ny Atlas izay manadihady sy mampivondrona teny eran-tany mihoatra ny 2,500 izay voasokajy ao anatin'ny fiteny malemy, tandindonin-doza, na maty. Ny UNESCO dia manombatombana ihany koa fa amin'ireo teny 6,000 ampiasaina ankehitriny, mihoatra ny atsasany no ho faty amin'ny taon-jato manaraka, ary manampy
amin'ny fanjavonan'ny teny tsy voasoratra sy tsy voatahiry, tsy ho very harena ara-kolontsaina fotsiny ihany ny olombelona, fa fahalalàna nentin-drazana manan-danja, indrindra, any amin'ireo tenin-janatany ihany koa.
Mila fandraisana fepetra haingana ireo teny ireo. Any amin'ireo faritra lavitra, mpiteny azo isaina amin'ny ratsan-tànana sisa no tavela. Maro ireo teny no mbola malemy noho ny famoretan'ny fanatontolona. Amin'izay fotoana izay, mitombo ihany koa ny hetsika izay mipoitra any amin'ny toerana misy ireo bilaogera miha-mahatakatra ny lanjan'ny fihazonana ny tenin-drazana na eo aza ireo famoretana avy any ivelany. Avy amin'ny alàlan'ny fampiasàna ny mediam-bahoaka mpandray anjara sy ireo fitaovana web 2.0, tahaka ireo bilaogy, Twitter, Facebook, sy ireo lahatsary nomerika, ireo olon-tsotra ireo dia manangana fikambanambe miompana amin'ny fampiasana iraisana an'ireo teny zara raha misy mpiteny ireo.
Ireo tetikasa tahaka ny Indigenous Tweets and Blogs no mampahafantatra ireo mampiasa tenin-janatany tsy tapaka, manamora ny fahitana olon-kafa sy ny famporisihana amin'ny asa izay sahaniny. Nefa misy ireo olana – misy fiatraikany amin'ireo fianakaviambe maro ny fampisaraham-bazana nomerika ary matetika dia tsy hita ireo tenin'olombitsy. Amin'ireo tranga sasany, misy ihany koa ny sakana ara-kolontsaina amin'ny fampiasàna ireo tenin-janatany eny amin'ny sehatra ankalamanjana. Na eo aza ireo olana ireo, maro ireo ohatra amin'ny fanatonana mampiditra fomba vaovao mba hitandrovana sy hanandràtana ireo teny ireo amin'ny alàlan'ny mediam-bahoaka sy ireo fitaovana web 2.0. Ireo tanora mpitarika sy ireo olona “mpanelanelana” (matetika dia hakàna ohatra avy amin'ireo olon-tsotra izay afaka manelanelana kolontsaina roa samy hafa) dia manangana hetsika manodidina ny fampiasàna, fitahirizana sy fanandràtana ireo teny ireo anatina resaka ao amin'ny aterineto.
Miarahà aminay anatin'ity resadresaka ao anaty aterineto ity mba ho làlana iray hizarana ireo traikefa sy hahazo fahalalana momba ireo fomba ampiasain'ireo olon-tsotra mpikaroka fomba vaovao sy ireo tetikasa izay mampiàsa ny mediam-bahoaka sy ireo fitaovana web 2.0 mba hanandràtana sy hiarovana ny fampiasàna ny teniny ao anaty aterineto!
*Ao anatin'ireo teny zara raha misy mpiteny ireo rehetra izay teny zara raha ampiasaina anatin'ny sehatry ny solosaina sy ny media vaovao. Maro amin'izy ireo no vitsy mpiteny sy tandidonin-doza amina mari-drefy iray na hafa; ny hafa kosa dia manana mpiteny mafanjaka saingy manoloana fizarazarana ara-dizitaly noho ny fiezahana ampiàsa ny teniny ao amin'ny aterineto.
21 Oktobra 2011
Maro dia maro ny mpandray anjara azo anontaniana notendrena hanampy amin'ity tafatafa ity ka tafiditra amin'izany :
Eddie Avila ao amin'ny Rising Voices, Bolivia
Kevin Scannell ao amin'ny Indigenous Tweets
Martin Benjamin – Tale mpanatanteraky ny Kamusi Project International, miasa ho amin'ny fiarovana ny fiteny Afrikana
Edmond Kachale – miasa ho amin'ny fiarovana ny fiteny Chichewa
John Paul Montano ao amin'ny www.barbaranolan.com miasa ho amin'ny fiarovana ny fiteny Ojibwe
Ian Custalow – miasa ho amin'ny fitandrovana ny fiteny Powhatan
Mohomodou Houssouba of www.songhay.org miasa ho amin'ny fitandrovana ny fiteny Songhay
Tēvita O. Ka'ili, PhD – Profesora Mpanampy ao amin'ny Anjerimanontolon'i Brigham Young, Hawai'i, miasa ho amin'ny fiarovana ny fiteny Tongan
Boukary Konaté – miasa ho amin'ny fitandrovana ny fiteny Bambara
Karaitiana Taiuru – mpanolo-tsaina miasa ho amin'ny fiarovana ny fiteny Maori
Adrian Cain avy ao amin'ny Manx Heritage Foundation, miasa ho amin'ny fitandrovana ny fiteny Gaelika
Ben Frey – miasa ho amin'ny fiarovana ny fiteny Cherokee
Oliver Stegen – miasa ho amin'ny fitandrovana ny fiteny Kilaangi
Niamh Ní Bhroin izay manao fikarohana amin'ny fandraisana anjaran'ny Sámi sy ny Irlandey amin'ny fampivoarana ateraky ny media Web 2.0 amin'izao fotoana izao
Emani Fakaotimanava-Lui avy ao amin'ny Internet Niue miasa ho amin'ny fitandrovana ny fiteny Niuean